WALTAJJII GAMAAGGAMA RAAWWII HOJII WALAKKAA WAGGAA MANNREN MURTII OROMIYAA | Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa
Hirmaattota Korichaa (suuraa 1)
Gamaaggamni raawwii hojii walakkaa waggaa Manneen Murtii Oromiyaa Amajjii 28-29 bara 2014 guyyoota lamaaf Magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa ture xumuramee jira.
Waltajjcihaan gabaasni Manneen Murtii Ol’aanaa hundaatuu dhiyaatee mariin bilchina qabu irratti gaggeeffameera. Haaluma kanaan Pirezidaantootni MMO gabaasa sochii hojii Manneen Murtii Godina isaanii garee marii keessatti ramadamanitti dhiyaassaniiru; marii gaariinis guyyaa tokkoo fi walakkaaf taasifameera.
Oolmaa guyyaa lammaffaa waaree boodaatiin bu’aan marii gareewwan afran hundaa’anii dhiyaateera; gabaasni mil’uu dirree koreewwan MMWO Manneen Murtii Ol’aanaa 11 fi Aanaalee 22 irratti taasisan bakka tokkotti cuunfamee dhiyaateera; cuunfaan gabaasa waliigalaa sochii Manneen Murtii Naanncihaas dhiyaaera.
Hirmaattota Korichaa (Suuraa 2)
Xumura waltajjichaa irrattis Pirezidaantiin MMWO Kab. Obbo Gazaalii A/Simal fi Pirezidaantii Itti Aanaan MMWO, Kab. Obbo Guyyoo Waariyoo argamuun dhiibbaa rakkoon nageenyaa fi dhibeen Covid-19 uuman keessatti hojiiwwan gaarii hojjatamaniif beekamtii erga kennanii fi galata qaban hawaasa Manneen Murtii Naannichaaf galchanii booda dhimmoota gurguddoo xiyyeeffannoo kurmaanota itti aanuu irratti kallattii fuulduraa kennaniiru.
Kab. Obbo Gazaalii A/Sinmal, Pirez. MMWO fi Kab. Obbo Guyyoo Waariyoo Pire. I/A MMWO
1. Qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyeessuuf hanqinaalee murtiiwwan oliyyataan Mana Murtii sadarkaa itti aanutti diigamanii fi fooyya’an sababa isaa wajjin adda baasuu fi abbaa itti gochuu; hanqinaalee odiitii dhimmaa murtiin boodaatiin adda bahan abbaa itti gochuu fi akkaataa sanaan sirreeffama barbaachisu fudhatamaa akka deemamu;
2. Rakkoon qulqullina harki guddaan Manneen Murtii Aanaalee biratti waan mul’atuuf kun xiyyeeffannoo ol’aanaadhaan irratti hojjatamuu kan qabu ta’uu;
3. Dhaqabamummaa gama ilaaluun itti fayyadamni teekinoolojii odeeffannoo ciminaan irratti hojjatamuu kan qabu ta’uu; Manneen Murtii Aadaa hundeessuu fi hojiitti galchuun ciminaan hojjatamuu kan qabu ta’uu (dhaabbilee barnootaa ol’aanoo wajjin akka hojjatamu);
4. Rakkoolee naamusaa ammas mul’achaa jiran maqsuun hojii hooggansaa waan ta’eef hooggansi kamuu galee xiyyeeffannoon irratti hojjachuu qabu ta’uu;
5.Bulchiinsa keessoo gaaromsuun wal qabatee hanqinaaleen bakka tokko tokkotti mul’atan hatattamaan sirrachuu akka qaban;
6. Hooggansi hanqinaalee mudachaa turanii fi kallattii MMWO irraa kennaman ofitti fudhachuun kutannoon irratti hojjachuun itti gaafatamummaa heera mootummaatiin Manneen Murtii irratti gatame milkeessinee haqa uummata keenya mirkaneessuu qabna jechuun kallattii kennaniiru.
DAAYIREKTOREETII DHIMMOOTA KOMUNIKEESHINII MMWO